दलान नेपाल : अन्योलताको भुमरीमा मधेश देखि काठमाडौ ।
अन्योलताको भुमरीमा मधेश देखि काठमाडौ ।
at 8:45 AM Posted by Dalan
शुक्रवार सर्लाहीको मंलवामा महिलाहरुले निकालेको विशाल जुलुस
चार महिना नाघेको पनि १० दिन वित्न लाग्यो जारी मधेश आन्दोलनको । काठमाडौ देखि मधेश सम्मको एउटै साझा प्रश्न देखिन्छ । अब के हुन्छ त ? जसको उत्तर आन्द्योलनरत मधेशी मोर्चा देखि सरकारी पक्ष कसै संग आजको मिती सम्म छैन । सबै संग कुरा गर्नुस, निष्कर्ष एउटै हुन्छ, भन्न सकिन्न, के हुन्छ, हुन्छ । गएको ३ असोजमा जारी गरिएको नयां संविद्यान प्रति असन्तुष्टि जनाउदै सुरु भएको मधेश आन्दोलनको मुख्य गरी सघियताको सिमाकंन सहितको मधेशको प्रतिनिधित्वको सवालमा मुद्धाहरुलाइ उठाएका छन । आन्दोलन सुरु भएयता सरकारी पक्ष संग अथवा प्रमुख दलहरु संग मोर्चाको वार्ता पनि नभएको होईन । हाल सम्म कम्तीमा पनि दुवै पक्ष विच २३ पटक वार्ता भइसकेको देखिन्छ । तर दुवै पक्षको विचमा कुरा मिल्ने छाटकाट देखिएको छैन । आन्दोलनरत मोर्चा भन्छन, आन्दोलनकारीहरुको मुख्य माग संघियताको सिमाकंन प्रति प्रमुख दलहरु अहिले सम्म लचिलो भएर कुरा गर्न तयार नै छैन । प्रमुख दलहरु भन्छन, सिमाकंनलाई थाती राखेर सहमती गरौ । मोर्चा भन्छन, त्यो कुनै पनि शर्तमा मान्य छैन । गएको मंगलवार विभिन्न उच्च स्तरीय वार्ताहरुमा सहभागी सदभावना सहअध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्णले यो संवाददातासंगको एउटा कुरामा आन्दोलनकारीहरुको वह यसरी पोखो, मधेशमा जुन स्तरको आन्दोलन चलीरहेको छ, त्यसको आधारमा हामी अत्यन्तै लचिलो मागहरु सहित प्रस्तुत भएका छौ तर पनि प्रमुख दलहरुले यसलाई गम्भिरता पुर्वक लिने कुनै छाटकाट छैन ।
काठमाडौमा के हुदै छ ?
कर्ण भन्छन, सिमाकनको वारेमा अहिले सम्म ठोस रुपमा कुनै कुरा नै भएको छैन ।
काठमाडौमा आन्दोलनरत मोर्चाका शिर्ष नेताहरुले ३ पुषमा सरकारसग वार्ताको औचित्य समाप्त भएको भन्दै आन्दोलन कडा पार्ने निर्णय गरे । उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भनेका थिए, हामी वार्ताका साथ अत्यन्तै लचिलो भएर काठमाडौमा बैठकहरु गर्यौ तर सरकार पक्ष जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएन , त्यसैले अब हामी सवै काठमाडौ छाडदै छौ । सरकारले अब वार्ता गर्न खोजे मधेशमै आउनु पर्छ । तर त्यसो भएन । त्यसको दुई दिन पछि देखि नै स्वर्यम ठाकुर र मोर्चाका अन्य शिर्ष नेताहरु फेरी विभिन्न तहको वार्तामा काठमाडौमा सक्रिय देखिए । मोर्चाको नेताहरु काठमाडौमा भारतीय राजदुत देखि सरकारी वार्ता टोलीको पत्र वुझारत हुदै काग्रेस नेतृत्व सगं अली वढी निकटताका साथ वार्ताहरुमा बसेको देखियो । सरकारी वार्ता टोली मार्फत मन्त्रीपरिषदको अधिकारीक निर्णय बुझेको मोर्चाले गएको मंगलवार त्यसलाई अपुरो भन्दै थप वार्ता त्यसकै आधारमा अघि वढन नसक्ने बताए । यता मोर्चाले औपचारिक रुपमा त्यसतो निर्णय गरे पनि मोर्चाका शिर्ष नेताहरु भने काठमाडौ छाडेन । उनीहरु वार्ताको फेरी कुनै नया पहलकदमी होला कि भन्नेर करेको कुर्यौ भए । मोर्चा स्रोत भन्छन, मोर्चाका नेताहरुले सरकारी पक्ष कम से कम त्यसलाइृ आधार बनाएर संघियताको वारेमा कुरा गर्न आउछ कि भन्ने लागेको थियो तर शुक्रवार अवेर साझ सम्म त्यस्तो देखिएन । वरु शुक्रवार एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवलाई भेटेर संघियताको सन्दर्भमा उही तीन महिने राजनितीक समिती बनाएर र अरु कुरामा सहमती गरेर अघि वढन आग्रह गरेका छन । जुन कुरा मोर्चाले पहिला देखि नै अमान्य भएको भन्दै मान्न नसकिने बताइसकेका छन । सदभावना सहअध्यक्ष कर्ण भन्छन, संघियताको मुद्धा तीन महिनामा कसरी र कुन आधारमा गर्ने वारेमा समेत प्रमुख दलहरु खुलेर कुरा गरेका छैन, अनि हामी त्यसलाइ त्यतीकै कसरी मानेर अघि वढन सक्छौ । मोर्चाले अहिले कम्तीमा संघियताको लागी वन्न आयोग मार्फत मधेशमा दुइ प्रदेश हुनु पर्ने ग्यारेन्टी खोजेका छन । जस प्रति प्रमुख दलहरु अझै लचिलो हुन सकेको छैन ।
मोर्चाका शिर्ष नेताहरुको निष्कर्ष छ, वर्तमान ओली सरकार उग्र राष्टवादको नारामा यसरी अल्झीसकेको छ कि उ त्याहा वाट निस्कन सक्दैन । एक शिर्ष नेता भन्छन, वर्तमान ओली सरकार पुरै प्रतिरक्षत्मक अवस्थामा पुगीसकेको त्यतीकै अव छर्लड भइसक्यो, त्यसैले यसको अवशान पछि मात्रै कुनै नया ठोस वातावरण बन्न सम्भावना छ ।
यस विचमा मोर्चाको र काग्रेसको पटक पटक भएको वार्ताले वाहिर पनि यस खाले संशयहरु पैदा नगरेका होईन । तर मोर्चाका नेताहरु भन्छन, एमाले वार्ता प्रति रती पनि इमान्दार नदेखिए पछि काग्रेसले पनि त्यो पहलकदमी लेला कि भनेर मात्रै कुरामा बसेका छौ । तर आज सम्म यता तर्फवाट पनि ठोस कुनै वातावरण बनीसकेको छैन । कतिपय भित्रियाहरु भन्छन, अब जव सम्म काग्रेसको महाधिवेशन हुदैन र नयां सरकारको निर्माणको आधार तय हुदैन तव सम्म आन्दोलरत पक्षको सम्बोधन हुने कुनै छाटकाट छैन । मोर्चा स्रोत भन्छन, वर्तमान सरकार खसे पछि एउटा अर्को वातावरणको निर्माण होला कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो र काग्रेस र एमाओवादीले केहि अगाडी वढेर पहलकदमीहरु लिएको अवस्थामा एउटा सहज वातावरण बन्न सक्छ । तर भित्रियाहरुको बुझाईमा पुरै प्रतिरक्षत्मक अवस्थामा पुगीसकेको ओली सरकार फागुन सम्म जेततेन जान सक्ने सम्भावना छ । तर कतिपय भन्छन, यही विचमा पनि कुनै नया लफडा नआउला भन्न सकिन्न, जसले ओलीको प्रतिरक्षात्मक अवस्थालाइ समेत समाप्त पार्न सक्लान ।
त्यसो भए मधेशमा के हुन्छ त ?
गुप्ता भन्छन, मधेश अहिले सुरक्षकर्मीको व्यारेक जस्तो देखिएको छ ।
गएको एक महिनमा मधेशमा ११ ओटा आमसभाहरु गरेर हाल विराटनगर तिर रहेका तमरा अभियानका सयोजक जेपी गुप्ता भन्छन, आन्दोलन जती लम्बिदै गइरहेको छ, मधेशका नागरिकहरुको आन्दोलन प्रतिको प्रतिवद्धता त्यतीकै नै वलियो हुदै गइरहेको देखिन्छ । गुप्ता भन्छन, आम मधेशीहरु गएको चार महिना देखि आन्दोलनमा छन, जसका कारण उनीहरुले व्यापक क्षती व्योहोरेको देखिन्छ तर उनीहरु आफुहरु अधिकार पाउने आशमा त्यसलाई गौण बनाएको महसुस हुन्छ । यसले काठमाडौमा कतै लामो समय हुदै गयो भनेर आन्दोलन तुहिन्छ भन्ने आकंलन छ, त्यो होला जस्तो मलाई लाग्दैन, गुप्ता भन्छन, हो यती लामो हुदा र मानिसहरुको दैनिक कामकाजहरुले विभिन्न् उतारचढाव देखिन सक्छ । गुुप्ता जारी आन्दोलनको वर्तमान अवस्थालाई सुरक्षकर्मीको व्यारेक संग तुलना गर्छन, उनी भन्छन, जसरी सुरक्षकर्मीहरु व्यारेकमा हुन्छन र कही कतै भयो भने सवै तैनाथ भएर प्रस्तुत हुन्छ, ठिक मधेशको अवस्था त्यसतै छ, आन्दोलन लामो भएका कारण मानिसहरु आफनो कामकाज तीर जान थालेका छन, तर अली कती पनि केहि भयो भने पुरै ज्वारभाटा जस्तो भिडको भिड मानिसहरु सडकमा उत्रन वेर लाग्दैन । उनले हालै विरगंज, गौर, मंगलवा र जनकपुरमा भएको घटनालाई पनि त्यसरी हेरेर विश्ल्ेषण गर्छन ।
खासगरी सदरमुकाम वाहेक ग्रामिण भागमा समेत आमसभाहरु गर्दै आइरहेको गुप्ता नेतृत्वको गठवन्ध लोकतान्त्रिक मोर्चाकै माग संग मिल्ने गरी ९ बुदे छुटै मागहरु समेत अघि सारेका छन । गुप्ता भन्छन, हामी गाउ गाउमा आमसभा सहितको कार्यक्रमलाई लिएर जादा आम मधेशीहरुको प्रवल चाहना अहिले पनि एउटा देखिन्छ, कि सबै मधेशीहरु किन एक ठाउमा अहिले पनि आउन सकिरहेको छैन । मधेशी मोर्चाले आन्दोलनमा रहेको सवै पक्षहरु संग सहकार्य गर्ने निणर्य गरे पनि त्यसको वारेमा अहिले कुनै प्रगती भएको देखिदैनन । गुप्ता भन्छन, आफुहरुको गठवन्धन मोर्चासंग एकता हुन तयार रहेको र आफुहरु सरकारी पक्षहरु संग एउटै माग र एउटै वार्ता टोली पनि जाओस भन्ने अपेक्षा राखेका छौ । उनी भन्छन, गाउ गाउमा हामी जादा यो प्रश्न हामीसैग मधेशी नागरिकले गर्छन । मधेशमा नागरिकहरुमा मधेशी पार्टीहरुका नेतृत्व प्रति ठुलो आशंकाहरु पनि प्रगट भईरहेको र त्यस वारेमा पनि विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु देखिएको उनी बताउछन । गुप्ता संगै मधेशमै रहेका नेताहरु भन्छन, लामो आन्द्योलन भएकाले विभिन्न उतार चढाव आउनु स्वभाविकै हो । चिसो अली कम भए लगतै मधेशमा फेरी ठुलो ज्वारभाटा आउने निश्चित छ ।